Ọdịnihu nke mmekọrịta onye ọrụ: Na-abụghị Touchscreens | Martech Zone
Ihe omuma a site na Smartlọ ahịa Smart atụle ọdịnihu nke onye ọrụ ihu karịa ihuenyo mmetụ ahụ. Ikekwe onye ọrụ ntanetị kachasị elu m na-eji Apple Watch m taa. Nchikota nke otutu aka, nsogbu, bọtịnụ, na dials di mgbagwoju anya. Na mkpịsị aka aka m, ọ bụghị mgbe niile ka ọ bụ ahụmịhe na-enweghị ntụpọ. Obi dị m ụtọ banyere ọdịnihu!
Nsonaazụ Ọrụ Ndị Ọrụ Ọdịnihu na ihu
Smartlọ ahịa Smart na-egosipụta ụfọdụ teknụzụ ndị dị nso na-agbanwe mmekọrịta ndị ọrụ:
Ihe osise - Microsoft ebubatalarị Hololens ma mepee ihu mmepe. Elon Musk gosipụtara ụfọdụ ihe omuma nke ihu ihu ala dị ka nke ọma.
Ihe Organic Lighting Emitting Diodes (OLED) - Ugbu a anyị nwere akụkụ dị larịị na nke dabara adaba, mana nke siri ike, ihu na mbadamba, laptọọpụ na ihu. Agbanyeghị, enwere ike iji teknụzụ OLED na ihu na-agbanwe agbanwe. Cheedị echiche ọdịnihu ebe ekwentị gị dị ike dị ka kọmpụta desktọọpụ ọ bụla, ị nwere ike ịnọdụ ala na ụlọ ahịa kọfị wee wepu ma mepee ihuenyo 30 nke gị. Ma ọ bụ ma eleghị anya, ọ wuru ya kpọmkwem n'ime uwe gị!
Mkpakọrịta Brain Wave - Ruo ọtụtụ afọ, nyocha ahụike abụrụla mmekọrịta dị mma na usoro mmekọrịta anyị. Ngwongwo ohuru ohuru ohuru, nke ike teknụzụ kọmpụta dị ike, na-aza ọsọ ọsọ dabara adaba maka mkparịta ụka. Ngwaọrụ ọhụrụ, dị ka Emotiv, jiri nyocha electroencephalography (EEG) iji banye n'ime ebili mmiri nke ụbụrụ n'ezie iji nweta ngwa na mpụga.
Naanị njirimara onye ọrụ ma ọ bụ mmekọrịta m kwenyere na ihe ọmụma infographic na-efu bụ nkwanye olu. Ọ bụ ezie na ọ na-abụrịrị isi ugbu a, ọdịnihu nke iwu olu ga-adị elu karịa n'ọdịnihu dị nso.
Ma ọbụna taa, anyị Amụma Amazon dị oke egwu n'ịghọta iwu olu na ịza ya nke ọma. N’uche nke m, ọ ka mma karịa ụda olu dịka Apple’s Siri.
Tags: ụbụrụnchọpụta ụbụrụemotivholografihu igwe holographichololensnjikwa uchekpọnyeIhe Organic Lighting Emitting Diodesihuenyo mmetụ akatouchscreensmmekọrịta onye ọrụonye ọrụ
Etu otu ndi isi ochichi na-eji ahia ahia Email
Kedu ihe bụ Brand?